राति ९ बजेपछि मदिरा बिक्री वितरण गर्न नपाईने
असोज ३०, २०७५ पत्रपत्रिका
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै अनुमति प्राप्त पसलले मात्र मदिरा बिक्री गर्न पाउने जनाएको छ । विजयादशमीलाई लक्षित गरी प्रशासनले सूचना जारी गरेको हो ।
प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकालद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा चाडपर्वलाई अनुशासित तरिकाले मनाउनका लागि आग्रह गरिएको छ ।
लोकमार्गका होटलबाहेक अन्य होटल राति १० बजेपछि बन्द हुनुका साथै मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पनि १० बजेपछि बन्द गर्नुपर्ने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।
जुवातास र कौडा खेल्ने, खेलाउनेलाई कडा कारवाही गरिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सर्पदंशको उपचार नपाएर मृत्यु भएका बालक सलिन विकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको छ ।
सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष डा प्रकाश खतिवडाका अनुसार विकको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर देखेर चिकित्सक र कर्मचारीले आर्थिक सङ्कलन गरेर सो रकम राहत स्वरुप उपलब्ध गराइएको हो । गत भदौ २१ गते सर्पले डसेर विकलाई भरतपुर अस्पतालमा पु¥याइएको थियो ।
सो घटनाको छानबिन गर्न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख विजय झाको संयोजकत्वमा छानबिन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिले पीडित परिवारलाई राहत दिन र दोषीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । अस्पतालले सो प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, असोज ३०, २०७५१३:०७
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र मध्य-तराई जादै, एकढिक्का भएर हिन्दुराज्यको पक्षमा लाग्न सल्लाह
राष्ट्रपति भण्डारीकै दबाबमा एकेडेमी हटाएर हेलिप्याड ! प्रहरीको होहल्ला र फायरिङले राष्ट्रपतिलाई डिस्टर्ब
पूर्वअधिराजकुमारीलाई ३५ दिने “अल्टिमेटम”
त्रिभुवन विमानस्थल २०२०मा बुटिक विमानस्थलका रुपमा उद्घाटन हुने, के हो बुटिक विमानस्थल ?
श्रेयालाई वडाध्यक्षको जवाफ, ‘अधिराजकुमार धीरेन्द्रलाई उभ्याउनू, अनि नागरिकताको सिफारिस दिन्छु’
प्रचण्डका ज्वाइँले भनेको बिना मगरले नटेरेपछि खुमलटारमा खैलाबैला !